[Wednesday, September 13th, 17] :: Carwadii seddaxaad ee Buugaagta oo laga furay Muqdisho
Mogadishu (RH) Magaalada Muqdisho waxaa maanta oo Arbaca ah si rasmi ah uga furmay bandhigga carwada buugaagta caalamiga, waana sannadkii seddaxaad oo isku xiga oo la qabto bandhiggan tan iyo markii ay burburtay dawladdii dhexe ee Soomaaliya 1991 kii.
Bandhigga Buugaagta Muqdisho, ayaa waxaa ka qeybgala qorayaal kala duwan oo ka kala yimid adduunka dacaladiisa ka kala yimid oo Soomaali u badan ayaa buugaagta ku soo bandhiga.
Sidoo kale abwaano, dad ku xeel dheer dhaqanka iyo afka Soomaaliya iyo marti sharraf kale oo lagu casuumay bandhiggan ayaa ka qeybgalaya bandhiggan.
Sidoo kale dooddo, iyo aqoon isweydaarsiiyo, iyo tababbaro ku saabsan dhaqanka iyo suugaanta ayaa lagu soo bandhigi doonaa mudadda seddexda maalin ah ee ay socoto carwadaasi.
Waxaa kaloo bandhiggan ka qeybgalaya dad u badan dhallinyaro kuwaasoo jecel hal abuurka iyo suugaanta iyo qoraalada Af Soomaaliga.
Dadweynaha ka qeybgalaya bandhiggan ayaa ah kuwa buugaagta iibsanaya, kuwa eegaya bugaagta lagu soo bandhigay iyo kuwa sawirro isaga qaadaya bandhiggan.
Bandhigyo noocan oo kale ayaa sannadkan lagu qabtay magaalooyinka Hargeysa iyo Garoowe, waxaana soo badanaya bandhigyda noocan oo kale ee dalka lagu qabanayo.
Dadka caanka ah ee ka qeybgalay furitaanka bandhigga maanta waxaa ka mid ah ergayga gaarka ee QM u qaabilsan Soomaaliya, wasiirkii horre ee arrimaha dibadda Soomaaliya Fowsiya Yuusuf Xaaji Aadan, Dr Cabdiraxmaan Baadiyow iyo Qoraayaal kale oo uu ka mid yahay Maxamed Daahir Afrax, Maxamed Xaaji Ingiriis iyo qorayaal ajnebi ah.